အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်ပါ သတင်း ဆောင်းပါး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေထဲက ကျွန်တော့်အာရုံမှာ လာငြိ တာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ Voice ဂျာနယ်ထဲက ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးရဲ့စကား တစ်ခွန်း ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့ သူ့စကားက ဒီလိုဗျာ။ “လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သမတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုမူ လို့ လက်ခံလာသလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိလာတယ်။ အဘိုး၊ အဖေနဲ့ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင် ထောင်ကျခံပြီး ဖယ်ဒရယ်ကို နားလည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းရကျိုးနပ်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တာဗျ။
ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ဆစ်ချိုး ကွေ့သွားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက အကြောင်းပြချက်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ အကြောင်းကတော့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မြေမြှုပ် သင်္ဂြိုဟ်၊ သူ့အခေါ် ဆိုရှယ်လစ် ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ ပြည်သူလူထု အများစုကြီး အခေါ် ဆိုရှယ်လစ်အရေခြုံတစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း ထူထောင်ရာမှာ သူ အဓိက ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြ ချက်က အဲဒီဖယ်ဒရယ်မူ ဖြစ်တယ်ဗျ။ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ ခွဲထွက်ခွင့် တစ်နည်း ဖယ်ဒရယ်မူကို အကြောင်း ပြုပြီး ပြည်နယ် တစ်ခုက ခွဲထွက်ဖို့ ကြံစည်ကြိုးပမ်းလာတာကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲသွားရလေအောင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို တပ်မတော်က ရယူ ထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီတုန်းက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းက တိုင်းပြည်ကို အသိပေး ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အရေးတော်ပုံကာလအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဟာ အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ(ပထစအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရှမ်းစော်ဘွား အများစုကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စ)ပြီးတဲ့နောက် တပ်မတော်က ဘာကြောင့် အာဏာသိမ်းရတယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို တရားဝင် အသိပေးကြေညာဖို့ အကြံရကျပ်နေတုန်း သူ့လက်ထောက် စစ်ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦးက ကြေညာချက်တစ်စောင် ရေးယူလာတယ်။ အဲဒီကြေညာချက် ထဲမှာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲရတော့မယ် အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အတွက် အာဏာသိမ်းရတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲဒါကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက ဖတ်ကြည့်ပြီး “အေး ကောင်းတယ်၊ အဲဒီအတိုင်း ရေဒီယိုက အသံလွှင့် ကြေညာလိုက်” လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်သာ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဟာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမှာကို တကယ်ပဲ စိုးရိမ်ပြီး အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပဲ သိမ်းချင်လို့ သိမ်းပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူ နဲ့ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမယ့် အနရာယ်ဆိုတာကို တမင်သက်သက် ဆင်ခြေဆင်လက် ဆင်နားရွက်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ထားပါတော့ဗျာ။ အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းရော၊ အဲဒီကြေညာချက်ရေးယူလာတဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီးရော၊ အဲဒီအာဏာသိမ်းပွဲ ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းတဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် အကုန်လုံးနီးပါး လောက်မရှိကြတော့ပြီမို့ ဒီကိစကို အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်လုပ် မနေချင်တော့ပါဘူးဗျာ။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက “ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲ မဲ့ အနရာယ် အမှန်တကယ်ရှိနေပြီလို့ ကျုပ်ကို နှစ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြိုပြောပါ။ အာဏာသိမ်းစရာမလိုပါဘူး၊ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တပ် မတော်ကို အာဏာအပ်မှာပါ”
ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် အာဏာသိမ်းတာလား။ အာဏာသိမ်း ပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူကို အကြောင်းပြချက်ဆင်ခြေအဖြစ် ဆွဲသုံးသလား ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့လို့ ရကောင်းရမှာဖြစ်ပေမယ့် ရာဇ၀င်ထဲမှာ မနေရစ်ခဲ့ဘဲ အဲဒီနောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ လိုက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ မြန်မာပြည်သူ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ အထူး သဖြင့် မျိုးဆက်သစ် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်အများစု စိတ်ထဲ ဖယ် ဒရယ်မူဆိုတာကို ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲရေးလမ်းစအဖြစ် စွဲနေကြတဲ့ကိစ ဖြစ်တယ်ဗျ။ တကယ်ပဲ စိုးရိမ်လို့လေလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ အာဏာ သိမ်းတဲ့ကိစကို တရားမျှတတယ် (justify) လို့ အများက မြင်အောင် လေလားတော့မသိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းနဲ့သူ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခု (တော်လှန်ရေးကောင်စီနဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ)က အဲဒီအချက်ကို ထပ်တလဲလဲ သံမှိုနှက်သလို နှက်ခဲ့ တာကြောင့်လည်း အဲသလို စွဲနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက ဖယ်ဒရယ်မူကို ရိုးရိုးသားသား စိုးရိမ် စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရိုးမသား အသုံးချခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကတော့ အဲဒီ ပုစ္ဆာကို ပဟေဠိအဖြစ်ထားခဲ့ပြီး လောကထဲက ထွက်သွားခဲ့ပြီမို့ သူ့ အတွက်တော့ ပြသနာမရှိတော့ဘူးဗျာ။ ပြသနာရှိနေတာက ဖယ်ဒရယ် မူကို ပြည်ထောင်စုဖြိုခွဲရေးမူအဖြစ် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အဆက် ဆက်က သဘောထားနေခဲ့ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည် တွင်းစစ်မီးမငြိမ်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကိစ္စြဖစ်တယ်ဗျ။ တပ်မတော်ခေါင်း ဆောင်တွေက ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတဲ့စကား ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြောတဲ့သူကို မျက်ထောင့်နီကြီးတွေနဲ့ ကြည့်၊ ဖယ်ဒရယ်မူကို ကိုင်စွဲပြီး မိမိ လူမျိုးစု အခွင့်အရေး (nationality’s rights)အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေ သူတွေကို လူမျိုးစုသောင်းကျန်းသူတွေအဖြစ် ရှုမြင်လာကြရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကင်းမဲ့ပြီး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းမနီး ဖြစ်လာခဲ့တာ အခုတိုင်ဖြစ်တယ်ဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှ မရ တော့လည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကာမှာ မပြောနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ တောင် ဓားမနောက်ပိတ်ခွေးဖြစ်တာ ဘာဆန်းသလဲဗျာ။
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အကျိုးဆက် အဖြစ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်လည်း အတော်ကလေးရလာနေပြီမို့ ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပြောနေ ဆိုနေ ရေးနေ သားနေကြပြီမို့ ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ် အဓိပာယ် အစစ်အမှန်ကို ပြည်သူတွေ အတော်ကလေး သဘောပေါက် နားလည်နေကြပြီလို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်ဗျာ။ တပ် မတော်သားတွေလည်း ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့အရင်တုန်းက ရှိထားခဲ့တဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုဟာ မှန်မမှန်ဆိုတာကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခွင့်ရရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ဦးအေးသာအောင် အခန်းဆက်ရေးခဲ့တဲ့ ပင်လုံနဲ့ ဖယ်ဒရယ် ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရှုခဲ့ကြသူများအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အတိတ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိပြီး အနာဂတ် အတွက် မြော်မြော်မြင်မြင်နဲ့ တွေးဆနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်ဗျ။
တစ်နည်းပြော ရရင် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးတွေကို လက်တွေ့မှာ အမှန်တကယ်ရရှိရေး တောင်းဆိုဖို့သာ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ နိုင်ငံရေးရဲ့သဘာဝအတိုင်း အကျပ်ကိုင်တာ ဖိအားပေးတာ ဈေးဆစ်တာ ဈေးကိုင်တာတွေတော့ ပါချင်လည်းပါမှာ ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် အများစုက ပြည်ထောင် စုက ခွဲထွက်လိုစိတ်မရှိကြတာတော့ ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် သေချာတယ်ဗျာ။ သူတို့ အဓိကလိုချင်ကြတာက ပြည်ထောင်စုအာဏာနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ အာဏာကို ပင်လုံညီလာခံ (တစ်နည်း)၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေပါ ဖော်ပြချက်တွေအတိုင်း တိတိကျကျ ခွဲဝေပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထောက်အထားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်ဗျာ။
“အိုဗျာ..ဒီဆယ်နှစ်အတွင်း ပြည်နယ်တွေ ခွဲမထွက်ချင် အောင် ကျုပ်တို့ ဗမာတွေက ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒီလိုမှ မကြိုးစားနိုင်ရင် ကျုပ်တို့ ညံ့လို့ပေါ့” လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပါ တယ်ဗျာ။ နှစ်ပေါင်းအရာအထောင် တမြေတည်းနေ တရေတည်း သောက်လာခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စုပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး မပြိုကွဲရလေအောင် လူများစု လူမျိုးစုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေက တရားမျှတ လွတ်လပ် ခြင်းနဲ့မသွေ တန်းတူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး စတင် ကြိုးပမ်းသင့်ကြဖို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျာ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သူတို့အာဘော်	5 Responses to ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပါပြီ (မောင်ဝံသ) U Aye on October 31, 2012 at 7:46 am Thanks U Won Tha. Please educate to the people and arm forces regarding the reality of history.
ဘုရင် on October 31, 2012 at 2:46 pm ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခေတ်မှာ ခေတ်ဟောင်းကအမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှားဖြစ်ဖြစ် အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး။ဒီကနေ့ နိုင်ငံ မှာဖြစ်စေချင်တာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းသာသာယာယာဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
pn wara on October 31, 2012 at 3:40 pm ဦးနေ၀င်း – ဦးနု တို့ မရှိတော့လို့သူတို့ ကို ထားခဲ့ပြီး အငြင်းမပွားချင်သော်လည်း ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စမှာ ဦးနု နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်တဲ့ ကိစ္စလို့ ထင်တယ်။ ၁၉၅၈ တုန်းက ဥိးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းဘို့ ကြံစီစဉ်က ဦးနု မှ ဦးနေ၀င်း ကို အာဏာသိမ်းလျှင် စစ်တပ်နာမည်ပျက်မယ်- မသိမ်းပါနဲ့ - ဥပဒေနဲ့ အညီ အာဏာလွှဲပေးပါမယ်- ဗိုလ်ချုပ်က အ်ိမ်စောင့် အစိုးရ တာဝန်ယူပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ပါ။ ခြောက်လပြည့်သည့်အခါ ဥပဒေ အတိုင်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ-တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ -ပေးပါလို့ တောင်းဆို ကတိပြုခဲ့ကြပြီး အာဏာလွှဲခဲ့တာလို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ဗိုလ်နေ၀င်းက ၆လအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဘို့ အချိန် မလုံလောက်ဘူး- ၂-နှစ်အထိ အချိန်တိုးဘို့ ပြောဆိုတာကြောင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ်ရောက်မှ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ မေးစရာဖြစ်လာတာက
Zo Khup on October 31, 2012 at 8:00 pm I wonderaBurmese Journalist dare to starts writing this issue.
Sai Lao on November 1, 2012 at 9:53 am You are Burmese hero journalist. Those are every Burmese should accept and make seen. If not peace in Myanmar is justadream.
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - လက်ရှိ မြန်မာ့ပညာရေး	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - လက်ဖက်ရည်ရောင်းသမားဘဝမှ နုိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သုို့	ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ - အပါယ်နဲ့ဝေးတဲ့လူ	တူမောင်ညို - စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ	ဂါမဏိ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာ ...	ကျော်ဟုန်း - အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း	ငြိမ်းချမ်းအေး - ကျနော် မန်ယူပရိသတ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း	အောင်ဝေး - ရ န် ကု န် ချီကျောင်းသား သ ပိ တ် တ ပ် ကြီးဘွဲ့( အ ပို င်း- ၄ ၊ နိ ဂုံး)	ဇော်ထွဋ် - လေဆိပ်	ဇေမှိုင်း - ရုန်းကန်နေသော ..... သို့ 	မိုးမခ Kindel Store
အသင်းအဖွဲ့များ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အနာဂတ်မြန်မာပြည် ဆွေးနွေးပွဲများ အပတ်စဉ် ကျင်းပမည် Eaint Khaing Oo - The hand god sent
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ ဥက္ကလံ ဓမ္မဧရိပ်တွင် ပထမဦးဆုံးတရားပွဲ ကျင်းပမည် MoeMaKa Online Store
စာပဒေသာ ကောက်စာများမလေးရှားနိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်တို့၏ အိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူအလုပ်သမများအပေါ် မတရားပြုခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ
Twitter: moemakaကာတွန်း ATH – စစ်သား စုဆောင်းရေး http://t.co/skWK9kt7Pa about 20 minutes ago ReplyRetweetFavoriteဇော်ထွဋ် – လေဆိပ် http://t.co/PnD4vWvt9l about4hours ago ReplyRetweetFavoriteလင်းနွေးအိမ် – ကျောင်းသားဆို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့ http://t.co/SUCNwfz96v about4hours ago ReplyRetweetFavoriteငြိမ်းချမ်းအေး – ကျနော် မန်ယူပရိသတ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း http://t.co/oEsu4ewjS3 about 23 hours ago ReplyRetweetFavoriteဇေမှိုင်း – ရုန်းကန်နေသော ….. သို့http://t.co/fwXXxWWUvl about 23 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.